चुनावको बेला बिष्फोटमा खुट्टा गुमाएकी राई परिवारको बिचल्ली - Naya Patrika
चुनावको बेला बिष्फोटमा खुट्टा गुमाएकी राई परिवारको बिचल्ली
रौतहट, २९ पुस | पुष २९, २०७४
निर्वाचनको क्रममा गत मंसिर २ गते रौतहतको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर-५ मा बम बिष्फोट हुँदा सरिता राई र उनका छोरा जैविक राईसहित एक दर्जन घाइते भएका थिए । उपचार पछि अन्य घाईते घर फर्किसके तर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने राई परिवारको भने अहिले बिचल्ली भएको छ ।
सरिता र उनका ७ बर्षीय छोरा जैविक राई भने अझै चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार गराईरहेका छन् । सरिताको बायाँ खुट्टा काटिएको छ भने जैविकको बायाँ हात काटिएको छ । छोरा जैविक राईको खुट्टामा पनि गम्भिर चोट लागेको छ, तर निको हुन अझै एक महिना लाग्ने परिवारका सदस्यले बताएका छन् । सरिताका श्रीमान् कृष्ण बहादुर राई दमको रोगले थलिएर राम्रोसँग हिडडुल गर्न समेत सक्दैनन् । पाँच जनाको परिवारलाई आफ्नै मजदुरीको कमाइले पाल्दै आएकी सरिताले बम विस्फोटका कारण खुट्टा गुमाएपछि परिवारकै बिचल्ली भएको छ ।
आमा छोरो उपचारका क्रममा अस्पतालमा छन् । हालसम्म ३ –तीन लाख रुपैंया खर्च भसकेको छ । त्यो पैसा कसरी तिर्ने र अस्पताल बसाईपछिको जीवन कसरी अघि बढाउने ? यस्तै प्रश्नहरुले उनलाई सताइरहेको छ । औषधीको मात्र ६ लाख भयो अरु अस्पतालको चार्जको पैसा कति कति कहाँबाट तिर्ने सरिताकी छोरी शान्ति राईले गुनासो गरिन् ।
आफ्नो खुट्टा गुम्यो, कलिलो छोराले हात र खुट्टा गुमायो, अब अस्पतालको खर्च कसरी तिर्ने ? घर फर्केपछिको जीवन कसरी गुजारा गर्ने ? सरकारले सहयोग गर्छ रे भन्ने सुनेको थिएँ, हामी गरिबलाई सरकारले पनि हेरेन, राईले भनिन् ।
ठुला नेताको आफ्न्त भएको भए यतिबेला सरकारसंग पैसा लिएर उपचार पछि घर फर्किसकेका हुन्थे तर गरिब परिवार बिष्फोटमा परेपछि अहिले घरमा खाने अन्न समेत नभएका कारण घरका अरु मान्छेको समेत बिजोक भएको छ, स्थानीय बासिन्दा बिष्णुलाल श्रेष्ठले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले १० लाख क्षतिपुर्तिका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । तर गृहमन्त्रालयले चासो नदेखाएको पाईन्छ । पहुँचवाला नेतासँगै विस्फोटमा परेकाहरुको उपचार खर्च व्यहोरेर सरकारले थप ५ लाख क्षतिपूर्ति समेत दिइसकेको छ, तर रौतहटका पीडितलाई भने अझै दिइएको छैन । राई परिवारका बिषयमा न यहाँका नेतालाई नै चासो छ न त सरकारलाई नै ।
चुनावका बेला बिष्फोटमा परेर घाईते राई आमा छोरालाई हेर्न र सान्त्वना दिनका लागि माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली लगाएतका नेताहरु अस्पतालमै पुगेको भएपनि अहिले उनीहरुलाई हेर्न र के कस्तो अवस्था छ भनेर बुभ्mन कोहीपनि नआएको परिवारका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
चारजना छोरा र एक छोरीलाई दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पाल्दै आएका राई दम्पतीकै चितवन स्थित अस्पतालको बास भएपछि घरमा रहेका चार जनालाई छाक टार्न समेत समस्या भएको छोरी शान्तिको भनाई छ ।
चन्द्रनिगाहपुरको चिडियादहमा रहेको सात धुर जमिनमा घर बनाउदै गर्दा आमा र भाइ बम बिष्फोटमा परेपछि अहिले राई परिवार छिमेकीको घरमा बस्न बाध्य भएको सरिताकी छोरी शान्तिले बताईन् ।
गत मंसिर २ गते रौतहट क्षेत्रनं ४ को चन्द्रपुर नगरको बाम गठबन्धनको वडा भेला भएको स्थानमा खाजामा समोसा बाँडेको थाहा पाएपछि नजिकै अर्काको खेतमा मजदुरी गर्न गएकी सरिताले आफुसंगै गएको छोराका लागि समोसा माग्न भेला स्थलमा जाँदा भएको बिष्फोटमा परी आमा छोरा नै गम्भिर घाईते भएका थिए ।
घाईते भएको दुई महिना बित्न लाग्दा समेत राज्यको तर्फबाट पीडितका लागि कुनै सहयोग नभएपछि राई परिवार झनै समस्यामा परेको छ । सम्पत्तिको नाममा रहेको सातधुर जमिन बेच्दा समेत उपचारको पैसा नपुग्ने भएपछि राई परिवार मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको छ । बिष्फोटमा परेकी सरिता राईको चार छोरा र दुई छोरी रहेका छन् । एक छोरीको बिहे भएको छ भने चार छोरा, एक छोरी र राई दम्पतीलाई यतीबेला बिहान बेलुकाको छाक टार्ने समस्या त छँदैछ अस्पतालको उपचार खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले परिवारका सदस्य झनै अतालिएका छन् ।